Jubbaland | Mustaqbal Radio
Home - Jubbaland
Xuseen Xaashi Xasan Gudoomiye ku xigeenka Guddiga Madaxa Banaan ee Xuduudaha iyo Federaalka ayaa sheegay in Guddigooda ay kormeer ku tageen Xarumaha Maamul Goboleedyada si ay u guda galeen howlahooda shaqo. Madaxda Maamul Goboleedyada ayuu sheegay in ay ka aragti mideysan yihiin Xalinta Khilaafaadka, marinka ay u marayaaannna uu yahay Dastuurka Dalka. Howlaha Guddigooda ay u xilsaaran yihiin waxa uu ...
Askar u dhashay Sierra Leone oo soo gaaray Somaliya,Sawirro
145 Sarkaal oo u dhashay Dalka Sierra Leone,kana mid ah howgalka AMISOM ayaa shalay soo gaaray Soomaaliya,waxaana loo wareejiyay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada hoose. Ciidankan oo Boolis ah waxaa ay ku biirayaan 15 Sarkaal oo u dhashay Sierra Leone,kuwaas oo horay ugu sugnaa Kismaayo. Arrintan waxaa ay ka dambeysay kaddib markii Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ay soo ...
SAWIRRO: Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka oo la kulmay Xildhibaanada Jubbaland
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS oo ay wehliyaan Guddiga La-socodka Dib-u-eegista Dastuurka ee labada Aqal iyo Guddiga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa kulan wadatashi ah la yeesheen Xildhibaanada Baarlamaanka Dawlad Goboleedka Jubbaland. Kulankan wadatashiga ah ayaa ahaa mid Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS iyo Guddiyada ay shaqo wadaagayihiin ay Xildhibaanada Jubbaland ugu soo bandhigayeen Tubta Hannaanka Dib-u-eegista Dastuurka. ...
Kismaayo: Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shilal Gaadiid
Ugu yaraan 3 qof ayaa geeriyootay halka ay 15 kalena ku dhaawacmeen kaddib markii shalay gelinkii dambe ay magaalada Kismaayo ka dhaceen saddex shil Gaadiid. Shilalka ayaa waxaa ay ka dhaceen Waddada isku xirta Magaaalada Kismaayo iyo Garoonka Diyaaradaha magaaladaas,waxaana dhimashada ay gaareysaa ilaa saddex qof. Gaadiidka gurmadka deg degga ah ayaa dadka ku dhaawacmay shilalkaas kala duwan ee banaanka ...
Ciidanka Kenya oo dekadda Kismaayo ka hela $12Milyan oo doollar
Ciidamada Dowladda Kenya ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay qeyb ka yihiin dhoofinta Dhuxusha Soomaaliya. Sidoo kale Ciidanka Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay u oggolaadaan Al-shabaab in ay helaan lacag dhan $10 Milyan oo doollar Sanadkiiba. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in Ciidanka Kenya ay Dekadda Kismaayo ka dhoofiyaan 4.5 ilaa 6 ...
Dad rayid ah oo ku dhintay duqeyn ka dhacday Jubada hoose
Ugu yaraan 3 qof oo Rayid ah ayaa dhintay halka Afar kale ay dhaawacmeen kaddib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay duqeyn ka geysatay degaanka Kaamjarroon ee Gobolka Jubada hoose. Dadka ku dhaawacmay weerarkaas ayaa la geeyay Isbitaalka Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada hoose ee Jubaland. Dadka dhintay oo xoolo dhaqato ahaa waxaa ay isgu jireen Hooyo iyo labo ...
Ku xigeenka Nabad Sugidda Kenya: “Jubbaland waxaan u abuurnay sugidda sohdimaha Kenya”
Qorshaha Dowladda Kenya ee lagu dhisay Maamulka Jubbaland waxaa la dhameystiray billowgii Sanadkii 2010kii. Hayeeshee gaba gabadiisii waxaa ay ahayd Bishii January sanadkii 2013kii markaas magaalada Kismaayo ay isugu tageen Ergo dhan 522 Qof,kuwaas oo qaatay go’aan adag islamarkaana madaxweyne u doortay hoggaamiye kooxeed hore Axmed Maxamed Madoobe. Barnaamijka lagu dhisay Jubbaland waxaa uu ahaa shaqada 19 sano ee Ninka ...